WAA MAXAY BOQOSHAADA FAA'IIDO LEH BOQOSHAADA - MUSHROOMS
Dareeska caanaha (Lactarius resimus) - isweydaarsashada boqoshaada leh cirridka lo'da, waxay ku koraan kooxo. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa cayriin, caddaan, pravskie ama qoyan. Ku koraan inta badan agagaarka geedaha cawska, samaynta mycorrhiza - marka mycelium fungus ka jira xididdada geed. Maqaarka fangaska waa caddaan, caleemo jilicsan oo qoyan, qoyan, daboolan leh xabo, oo leh aag isku xiran. Dabool cufan leh dhexroor ah 5-25 cm, oo ah miisaanka cusub ee muuqaalkiisu wuxuu leeyahay dusha sare, kaas oo markaa qaato foomka hindhis, geeska albaabka waxaa lagu duuduubay gudaha gudahiisa, wax yar ka dib. Lugta cirifka ah waa cylindrical, illaa 7 cm oo dherer ah iyo 3-5 cm dhexroor, wuxuu leeyahay midab cad ama midab huruud ah, mararka qaarkood jajab jaale ah.
Taariiqda musqusha ayaa ah mid aad u badan, ballaaran, hoos udhaca asliga ah. Wuxuu ciyaaraa huruud. Jirka jirka fangaska waa cufan, caddaan leh ari yar oo jilicsan. Casiirada musqusha waxay leedahay dhadhan qadhaadh ah, oo si tartiib ah u ciriiri - cadaan, kadibna huruud ah. Xilliga boqoshaada ee fungus wuxuu soconayaa Agoosto ilaa Oktoobar, si loogu yareeyo heerkulka ciidda ee heerkulka ugu fiican waa + 8-10 digrii.
Waa muhiim! Hermetic xiritaanka weelka leh boqoshaada la karkariyey ama cusbayn leh ayaa leh khatarta botulism
Boqol caano ah ayaa la kariyaa oo la cusbaynayaa, waxaa loo tixgeliyaa boqoshaada sida caadiga ah ee la cuni karo. Si looga takhaluso sunta, boqoshaada, marka lagu daro nadiifinta iyo maydhashada, waxay u baahan tahay in lagu daro ugu yaraan 72 saacadood oo biyo ah cusbo leh iyada oo bedelkeeda lagu soo celinayo.
Halbeegga xajmiga: Kalooriga, qiimaha nafaqada, fiitamiinada iyo macdanta
Kalooriyeyaashu waa 16 kiiloogiba 100 garaam oo boqokiiba, halka ay ku jiraan biyaha 88 g, borotiinka - 1.8 g, baruurta - 0.8 g, carbohydrates -1.1 g, fiber - 1.5 g, ash - 0 , 4 g. Gruzdi waxaa ku jira fitamiinada koox-kooxeedka, ascorbic acid, thiamin, riboflavin.
100 garaam oo kufasha ayaa ku jira fitamiin B1 - 0.03 mg, B2 - 0.24 mg, C - 8 mg, PP - 0.15 mg.
Carbohydrateska la kariyo ee lagu dhajiyo waxaa ku jira saxarka hilibka: di- iyo monosaccharides - 0.5 g halkii 100 g oo ah qayb la cuni karo.
Ma taqaanaa? Nolosha shafka ah ee cunnada la kariyey waa 6 bilood
Qaybaha waxtar leh ee Caanaha
Faa'iidooyinka caanaha jidhka bini-aadamka waa cad, qadarka borotiinka ee ku jira boqoshaada caanuhu maaha mid aad u liitay hilibka lo'da, iyo borotiinka qudaarta ayaa si fiican uga soo nuugaya borotiinka xayawaanka. Boqoshaada caanuhu waxay badanaa tahay ili ah borotiinka cunnada khudradda. Iyada oo ay ka kooban tahay kiimikada, boqoshaada caanuhu waxay fududeeyaan kooraska cudurka qaaxada, dhibaatooyinka urolithiasis iyo kelyaha. Cunista boqoshaada ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso xeryaha sunta ah iyo kolestaroolka, iyo sidoo kale si looga hortago khalkhalka xididdada dhiigga.
Gel waa antibiyooti dabiici ah, waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn, gaar ahaan ka hortagga muuqaalka dhagaxyada kelyaha, kaadiheysta iyo beerka. Casiirka basbaaska wuxuu leeyahay hantida cadaadiska bacillada tubercle. Waxa kale oo la rumeeysan yahay in ka dib markii salting ee boqoshaada abuuray kiimikada kiimikada leh hanti antiemlamory iyo anti-sclerosis. Mushrooms waxay ka kooban tahay walxo saameyn ku yeesha maqaarka, iyaga oo siinaya cufnaanta iyo isku dheelitirnaanta.
Isticmaalka dhego-beelka (daawooyinka)
Cudurada caloosha waxaa lagu bogsan karaa si joogto ah oo la gooyey boqoshaada la karkariyey iyada oo aan cusbo lahayn, hal soo dhaweyn waa inuusan ka badnayn 100 g oo boqoshaada.
Boqol caano ah ayaa loo isticmaalaa daawada dhaqameed si loo gaaro saameynta anti-sclerotic, anti-bararka iyo fayaq-nadiifinta sida waafaqsan hal cunto: boqoshaada cusbayn ayaa loo isticmaalaa 2-3 jeer usbuucii loogu talagalay 0.2-0.3 kg oo basal leh iyo saliid iyo khal iyo khalkhada oo aan loo dhigin 3 ilaa 1. Boqoshaada caanaha waa in la soodiyaa ugu yaraan hal bil ka hor daaweynta. Saliiddu waxay hagaajineysaa ayna sii wadi doontaa nuugista nafaqooyinka, iyo basasha cusub waxay kor u qaadi doontaa sifooyinka bogsashada ee salmon.
Waa muhiim! Boqoshaada caanaha la gooyey, iyo sidoo kale boqoshaada leh raadadka waxqabadka muhiimka ah ee sheyga, waa mamnuuc in loo isticmaalo cunto ahaan.
Sonkorta gruzdya waxay ku aasaysaa indhahiisa oo leh indho furan oo indhaha ah.
Shiinaha, isticmaalka cabitaanka casiirku waa mid caadi u ah duugista, waxaa la rumaysan yahay in tani ay yareyso murqaha muruqyada iyo murqaha muruqa.
Soo saarista basbaaska cusub waxay leedahay dabeecad liddi ku ah antifungal iyo antifungal, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta antitumor. Guryaha bogsiinta ee boqoshaada dhalinyarada ah ayaa lagu dabaqayaa daaweynta qaaxada, sonkorowga iyo cudurada sanbabada.
Ma taqaanaa? Wadamada reer galbeedka, caanaha looguma isticmaalo cunto, sababtoo ah waxaa jira fikrad ka dhalan karta.
Qalabka waxyeelada leh ee xajmiga iyo ka hortagga
Boqol caano ah kuma talinayso cunitaanka cunug yar, iyo isticmaalka boqoshaada ee dadka waaweyn waa in ay ahaadaan kuwo dhexdhexaad ah. Boqol caano ah maaha mid ku xiran kaydinta muddada dheer, sababtoo ah waqti ka dib guryahooda faa'iidada leh way lumaan, sida dhadhanka iyo carafka. Mushrooms waa in la nadiifiyaa ka hor inta aan la cunin, iyo habka karinta waa in ay maraan dhamaan tallaabooyinka wax soo saarka. - ka soo jiidashada daaweynta kulaylka saxda ah.
Daryeelka waa in la qaataa marka la goynayo boqoshaada, sababtoo ah waxay si fudud ugu jahwareeraan boqoshaada been abuurka ah iyo sunta. Haddii aad qabto wax shaki ah oo ku saabsan muuqaalka kore, waxaa wanaagsan inaad si degdeg ah uga saarto si looga fogaado sumowga iyo sumowga. Xaddidaadda isticmaalka niyadjabku waa qofka u nugul shubanka.
Caanaha waa aan loo baahnayn isticmaalka cudurrada caloosha iyo mindhicirrada, xanuunka foosha iyo xanuunka beerka.
Boqoshaada qoyan waxay leeyihiin waxyaabo waxyeello leh, waa la mamnuucay, sababtoo ah waxay halis u tahay sunta.